သံ့တွဲမြို့ကကျောင်းသားတွေရဲ့နှိပ်စက်ညှင်းပမ်းခံရမှုနှင့် ကလေးသူငယ်ဥပဒေချိုးဖောက်သူများ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » သံ့တွဲမြို့ကကျောင်းသားတွေရဲ့နှိပ်စက်ညှင်းပမ်းခံရမှုနှင့် ကလေးသူငယ်ဥပဒေချိုးဖောက်သူများ
Posted by ဖိုက်တာ(ဒွါရာမြေ) on Oct 7, 2011 in Copy/Paste | 19 comments
သံတွဲမြို့အထက(၁)မှာ၂၀၁၁ခုနှစ်၊စက်တင်ဘာလက (၁၀)တန်းကျောင်းသူ (ဘ)ဦးကျော်နိုင်ရဲ့သမီးမရွယ်ဆုပန်က ဆရာမကြီးကို ကျောင်းတွင်းစာမေးပွဲစစ်မယ်ရက်ကြေငြာ တာအရမ်းနီးကပ်ကြောင်းပြောဆိုသောအခါ ဆရာမကြီးက မေးခွန်းစာရွက်တွေကိုရန်ကုန်မှာရိုက်ရကြောင်း၊အဲဒီနေ့မှမေးခွန်းတွေရောက်တဲ့အတွက်နောက်တစ်နေ့ချက်ချင်းစာမေးပွဲစစ်မှာဖြစ်ကြောင်း၊သံတွဲမှာရိုက် ရင်ဈေးကြီးကြောင်းပြောသောအခါ မရွယ်ဆုပန်မှ ကျွန်မတို့ကျောင်းသူ/ကျောင်းသားတွေဆီကစာမေးပွဲဖိုးဆိုပြီး(၁၀၀၀)စီ ကောက်ထားတဲ့ငွေ တွေ(၁၀၀၀၀၀၀)လောက်ရှိတယ်၊အဲဒီငွေနဲ့ရိုက်ပါလားလို့ ပြောသည်ကိုဆရာမကြိးမှအားမနာပြောသည်ဆိုပြီး မိဘအားခေါ်ယူပြီးကျောင်းထုတ်ရန်ပြောခဲ့ပါသည်။မိဘများကအမျိုးမျိုးတောင်းပန်သော်လည်း ရွယ်ဆုပန်ကိုယ်တိုင်မှ ဒူးထောက်၍လူအများရှေ့တွင်တောင်းပန်မှ ကျောင်းမှာဆက်ပြီးလက်ခံနိုင်မယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်၊ အဲဒီနောက် (၃)ရက်လောက်ကြာတဲ့အခါ ကျောင်းခန်းမမှာ“မရွယ်ဆုပန်မှဒူးထောက်ဝန်ချတောင်းပန်ပွဲ” ဆိုတဲ့နဖူးစီးစာတန်းကြီးကိုချိတ်ဆွဲထားပြီး မြို့မိမြို့ဖဆိုသူများနဲ့ကျောင်းသားတွေရှေ့မှာ မရွယ်ဆုပန်က ဆရာမကြီးရဲ့ခြေထောက်ကိုဖက်ပြီးတောင်းပန်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။
ဒါဟာအသက်အရွယ်မပြည့်သေးတဲ့ကျောင်းသူမိန်မပျိုကလေးတစ်ယောက်ကို အရှက်ခွဲ ခဲ့ပြီး တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်တဲ့ ကလေးသူငယ်ဥပဒေကို ထီမထင်ဆိုင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်
သံတွဲမြို့၊မြို့မအလကမှာ ၂၀၁၁ခုနှစ်အစပိုင်းက ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးနဲ့ ဆရာဦးသောင်းရွှေတို့(၂)ဦးက ပထမတန်းကျောင်းသားလေးတစ်ယောက်ကိုလက်ပြန်ကြိုးတုတ်ပြီး
တိရစ္ဆာန် တစ်ကောင်ကိုရိုက်သလိုရိုက်နေလို့ အားကစားမှူးဟောင်းဦးမောင်ညီဆိုသူကမယကဥက္ကဌ(ယခု မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး)ထံကိုတိုင်ကြားခဲ့ပါတယ်။ တရားဆွဲမယ် ဆိုတဲ့အသံ တွေလည်းကြားခဲ့ပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် မယကဥက္ကဌနဲ့ ဦးမောင်ညီတို့လက်ဝါးခြင်းရိုက်ပြီး အဲဒီကိစ္စကို ဖျောက်ပစ်လိုက်ကြပါပြီ။ တကယ်တော့ဒီကိစ္စဟာရာဇ၀တ်မှုကြီးပါ၊ဒီလိုရာဇ၀တ်မှုကိုဖျောက်ဖျက်ပြီး မိမိကိုယ်ကျိုးအတွက်လုပ်စားသွားသူအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးမြတ်ကျော်နဲ့ဦးမောင်ညီတို့ကိုအရေးယူပြီး ရာဇ၀တ်မှုကိုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ သံတွဲမြို့မအလကကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးနဲ့ ဆရာဦးသောင်းရွှေတို့(၂)ဦး နဲ့အထက်မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ အထက(၁)က ကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီး ဒေါ်အောင်မြရီကိုလည်း ထိထိရောက်ရောက်အရေး ယူပေးပါရန်လေးစားစွာတိုင်ကြားအပ်ပါတယ် ခင်ဗျား
ဖိုက်တာ (ဒွါရာမြေ) has written3post in this Website..
View all posts by ဖိုက်တာ(ဒွါရာမြေ) →
http://myanmargazette.net/64708/uncategorized-other/copypaste နဲ့ kyaw kyaw 11 ကတင်ထားပြီးသားပါ။ တိုင်စာဆိုရင်တော့ တိုင်ကြားတဲ့နေရာမှားနေပါတယ်ရှင်။ ဒီအဖြစ်ကို သံတွဲက လူတွေအားလုံးသိပြီးသားပါ။ ဘယ်သူလွန်ခဲ့သလဲ။ ဘယ်သူမှားခဲ့သလဲဆိုတာကို မြို့လေးကကျဉ်းတော့ အားလုံးသိပြီးသားပါ။ လက်ဝါးဆိုတာ နှစ်ဖက်တီးမှ အသံထွက်တယ်ဆိုတာကိုတော့ သတိရစေချင်ပါတယ်။အကျိုးရှိလို့ အကြောင်းဖြစ်တယ်။ အကြောင်းရှိလို့ အကျိုးဖြစ်လာကြတာပါ။ ဒီပိုစ့်လေးကြောင့် ကလေးကိုရော ဆရာတွေကို မထိခိုက်စေချင်ပါဘူး။ ကလေးနဲ့ ကလေးရဲ့မိဘတွေကိုတော့ အားနာသင့်ပါတယ်။ မိုးလင်းကျရင် ကလေးဟာသူ့အကြောင်းအင်တာနက်မှာ ပါတယ်ဆိုပြီး စိတ်ထိခိုက်စရာတွေဖြစ်လာနိုင်သလို ကလေးမိဘတွေအတွက်လည်း မကောင်းပါဘူး။ တကယ့်ကို စေတနာစိတ်လေးရှိရင် ကလေးမိဘတွေနဲ့ သွားတွေ့ပြီးတော့ ဆိုင်ရာကိုသာ တိတ်တိတ်လေး တိုင်ကြားလိုက်ပါ။ အခုပိုစ့်ကလည်း အကြောင်းတရားမခိုင်လုံသေးပါဘူး။အကြောင်းရာတွေ ကျန်နေပါသေးတယ်။ ခံရတဲ့ဘက်က တစ်ဖက်သတ်ရေးထားသလိုပုံစံဖြစ်နေတယ်။ဒီထက်ပြည့်စုံအောင်ရေးပြီးမှ ဆိုင်ရာကိုတိုင်လိုက်ပါ။ မိဘများအတွက်ရယ်။ ကလေးအတွက်ရယ် ကိုကြည့်ပြီး အကြံပြုတာပါ။
ပိုစ့်ကတင်ပြီးသားလေးဖြစ်နေပါတယ် ။ သတင်းတွေကိုအရင်ကတည်းကကြားပြီးသားပါ ။ ဒေါ်အောင်မြရီကတော့ မဲနယ်ကွင်းမှာကတည်းက နာမည်ကြီးပါ ။
မြို့ ပေါ်ကျောင်း ဖြစ်ရဲ့ သားနဲ့ ခုလို အဖြစ်မျိုးတွေ ထပ်မဖြစ်စေချင်တော့ပါဘူး။မောင်မိုးဒီတို့ ရွာကျောင်းလေးဘဲ အေးချမ်းပါတယ်။ကလေးတွေတက်ဖို့ မြို့ ဘဲသွားနေတာ ဆိုတော့ ကျောင်းအုပ်တွေရဲ့ ပညာအရည်အချင်းကို မြှင့်တင်ပေးစေချင်ပါတယ်။
ကျောင်းသူကိစ္စ ကတော့ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်လွန်ကြတယ်ကြားပါတယ်
ဒါပေမဲ့ ကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီးတစ်ယောက်နေနဲ့ ငါ ဆိုတဲ့အတ္တနဲ့ ယ္ခုလို ဖြစ်ရပ်မျိုး
မဖြစ်သင့်တာတော့ အမှန်ပါ။ ခုတော့ ကျောင်းသူလေးလဲ အေးချမ်းစွာ စာသင်ကြားနေပါပီ
အလက ကျောင်းက ကြိုးတုတ် ရိုက်နှက်တဲ့ ကိစ္စ တော့ သေချာမသိလိုက်တော့ပါ ။
တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ခင်မင်မှုမှာ..လေးစားမှုလေးရယ်..မုဒိတာလေးရယ်..ယဉ်ကျေးမှုလေးရယ်..
ဆရာတစ်ယောက်အပေါ် လက်ညှိုးထိုးပြန်ပြောလို့ အရေးယူ တဲ့နေရာကနေမကြီးကျယ်သင့်ပါဘဲကြီးကျယ်သွားရတာပါ။ဘယ်လိုကြောင့်ဘဲ ဖြစ်ပါစေ ကိုယ့်ညီကို တို့ လဲဆရာမကြီးနေရာမှာဆို ဘယ်လို ဖြေရှင်းပေးမလဲ။
အလယ်တန်းကျောင်းက ပြဿနာမှာလဲ ကြိုးတုပ်ပြီး မရိုက်ပါဘူး။အပိုတွေဖြစ်နေတယ်။ကြိုးဖြင့်ချည်ပြရုံ၊ရိုက်ဟန်ပြချောက်လန့် ရုံသာဖြစ်ခဲ့တာပါ။ဒါကိုတွေ့ သွားတဲ့ ဦးမောင်ညီက ရန်ညှိုး၊ရန်စရှိတဲ့ ဆရာဦးသောင်းရွှေ အပေါ် ချောက်တွန်းခဲ့ခြင်းသာဖြစ်ပါကြောင်း။အခက်အလက်များ လွဲမှားနေပါကြောင်း ဆွေးနွေးသွားပါတယ်။အမှန်ပြင်တတ်ပါစေ. ကိုယ့်ညီကိုတို့ ။
ပညာရေးစနစ်ပြောင်းလဲလာတာလဲပါတာပေါ့လေ ။ ကလေးအထူးပြုပညာရေးစနစ်ဆိုတော့လဲ ။ ဟိုးအရင်ကဆို ဆရာကြီးဆရာမကြီးတွေက ကလေးတွေကိုအရမ်းရိုက်တယ် ။ ကလေးတွေကလဲဆရာတွေဆရာမတွေကိုပြန်မပြောရဲဘူး ။ ဆရာကြီးတွေအိမ်ရှေ့ကဖြစ်သွားတာမြင်ရင် အိမ်ထဲကနေပုန်းနေရတယ် ။ ခုကတော့ ဆရာကိုမြင်ရင်ကျောင်းသားက မေးလေးငေါ့ပြီး `စားပြီးပြီလား´ တဲ့ ။ ခက်ပါတယ်လေ ။
လိုက်ပါ ဥပဒေပုဒ်မအတိအကျတော့မပြောတော့ပါဘူး(ခွေးကို ဖိုးလပြသလိုဖြစ်မှာစိုးလို့)
ကိုရင် ny ..
ဒုံးဝေး တဲ့သူဒွေဂို အာပေါက်အောင်ရှင်းပြရမယ်ဝေး ။
ကျေးဇူး တင်ရမှာပါ ကို kai …၊
မကောင်းသူ ကောင်းသူကိုရွေးချယ် ပေးနိုင်တာ အကောင်းဆုံးပါ…၊
ကျနော် မကောင်းရင် ကျနော့ကို ရှင်းပါ …။
ကြာတော့လဲ အထေ့အငေါ့တွေကို စိတ်ကုန်လာလို့…။
ကလေးတစ်ယောက်ကိုကြိုးတုပ်ပြီးရိုက်ဟန်လုပ်တယ်ဆိုတာကတော့လွန်ပါတယ် ။ နုနယ်တဲ့ကလေးစိတ်ကလေးထိခိုက်သွားမှာပေါ့ ။ ဆရာတွေဆိုတာ ပန်းပျိုးလက်သခင်တွေလေ ။ ပန်းညွှန့်ချိုးတဲ့သူတွေမှမဟုတ်တာ ။ ခုလက်ရှိပညာရေးစနစ်အရဆိုရင်တော့ အရမ်းလွန်တဲ့ကိစ္စပေါ့ ။ မဖြစ်သင့်ဘူးထင်ပါတယ် ။ ကလေးအရမ်းဆိုးလွန်းရင်ကလေးမိဘတွေကိုခေါ်ပြီးသတိပေးလိုက်ပေါ့ ။ သားသမီးချင်းကိုယ်ချင်းစာကြပါဗျာ ။
ဥပဒေ ပုဒ်မတွေများ သိတယ်ဆိုရင် တရားသူကြီးလုပ်ကြစေချင်ပါတယ်။မဖြစ်သေးဘူး. လုပ်ခိုင်းလိုက်မှ ငါးပါးရောဆယ်ပါး ပါမှောက်နေမယ်။
စိတ်ထိမ်းတော်မူ ပါ မောင်တုတ်ကြီး ရာ ၊
မင်းတို့ ခနခန ပြောသလို ရှက်စရာ ကောင်းနေပါပြီ ။
ကောင်းတယ် မကောင်းဘူး ဒီလိုဖြစ်သင့်တယ် ဟိုလိုက မဖြစ်သင့်ဘူး
ဒါလောက်တော့ ဆွေးနွေးခွင့်ရှိပါတယ် ။ စိတ်ထိမ်းပါ ပြင်ပေါ်နေမှာ စိုးလို့..။
သံတွဲမြို့ မှလူများကို အရှက်တကွဲအကျိုးနည်းအရှက်ရအောင်လုပ်နေသူများ၏ လျှို့ ဝှက်ထားသင့်အရာများကို မကြာမီအားလုံးသိရအောင်ပြောပြပေးပါမယ်။
မည်သူက မည်သည့်အကောင့်ပိုင်ရှင်ဖြစ်သည်။အကောင့်နာမည်ဘယ်နှစ်ခုကို သုံးစွဲနေသည်။လိုအပ်ချက်ရှိနေ၍အချိန်ပေးစောင့်ပေးပါ။မကြာမီပြည့်စုံပါတော့မယ်ဗျာ။အခုလို ပြောပြပေးမှအားလုံးရှင်းကြမယ် ထင်ပါတယ်။အကိုတို့ ကို စိတ်နှောင့်ယှက်ဖြစ်အောင်လုပ်သူများမဟုတ်၊တရားခံသည် နှစ်ယောက်ထဲသာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ နှစ်ယောက်ရဲ့ username များ၊password များပါ ဖော်ပြပေးသွားပါမယ်။မန်းဂေဇက်မှာ သံတွဲမြို့ ဂုဏ်ကို မြှင့်တင်ပေးစေချင်လို့ ပါဗျာ။အရှက်ကွဲခဲ့ရပေါင်းများနေပါပီ။အကိုတို့ အတွက်မျှော်…….။။။။။။။။။
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဌ“ဦးရွှေမန်း” ကပြောတယ် “ဥပဒေရဲ့အထက်မှာဘယ်သူမှမရှိဘူး”တဲ့
ပုဒ်မသိတိုင်းတရားသူကြီးလုပ်ရမယ်ဆိုရင် ရှေ့နေတွေ၊ဥပဒေအရာရှိတွေ ပေါ်လာမှာမဟုတ်ဘူး
ပုဒ်မသိတိုင်းတရားသူကြီးလုပ်ရမယ်ဆိုရင် ရှေ့နေတွေ၊ဥပဒေအရာရှိတွေ ပေါ်လာမှာ မဟုတ်ဘူး
* ကျွန်တော် 2007 ခုနှစ်မှာ ပြည်သူပြည်သားတဦးဖြစ်တဲ့ ကျွန်တော့်လုံခြုံရေးအတွက် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသူရရွေမန်းကို လိပ်မူပြီး စာတစ်စောင်တင်လိုက်တော့ 2လလောက်အကြာ သံတွဲဆင်းစစ်တာပေါ့
* ကျွန်တော် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသူရရွှေမန်း ဆီပို့တဲ့စာကို mail ပို့လိုက်မယ် ဒီအခါ မမြင်တွေ့ဘူးတဲ့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ အကြောင်းနောင် ၀ိုင်းတော်သားတွေကို ဝေမျှကြည့်ပေါ့ …………. အဲဒီစကားလေးတော့ သတိရမိသား သြော် ဒီလင့်လေးမှာရေးထားတာ အာဘောတူနေသလားလို့ http://myanmargazette.net/71549/uncategorized-other/copypaste ကောမန့်တစ်ခုကအာဘော်လေးနဲ့ပေါ့။
block group ထဲမှာ ပါသွားချင်သလား
မပါချင်ရင် အေးအေးဆေးဆေး နေကြပါတော့
ကိုယ့်ညီကို တုတ်ကြီးကတော့လေ အသက်နဲ့ မလိုက်အောင်ကို တော်နေပါလား။သေချာရဲ့ လားကိုယ့်ညီကိုရယ်။ဒါဆို ကိုယ်တို့ မြို့ ကတရားခံတွေတော့ စိတ်ပျက်သွေးလန့် နေတော့ မှာအမှန်ဘဲ။တရားခံက နှစ်ယောက်ထဲဆိုတာကိုယ်တို့ သိပြီးသားအတိုင်းဘဲမလား။
ငရဲသား၊လူမုန်းစစ်မုန်း၊ကျိန္တိလီသား၊မြန်မာပြည်သား၊red bull,ice cube,pyinlepyaw,twister,killer,lupol,minthar,pannu,zippo,gipsyတချို့ ကနာမည်ပြောင်းပြီးသား ဖြစ်နေတယ်လေ ကိုယ့်ညီကိုရေ။အကောင့်တွေက ဟို ကြံ့ခိုင်ရေး ကပါတီဝင် ပိုင်တာတွေလဲ။ဟုတ်ပီပေါ့။ကိုယ်မသိသေးတာလေးတွေသိရအောင်လုပ်ပေးပါအုံး။ကျေးဇးတင်လိုက်တာ ကိုယ့်ညီကို တုတ်ကြီးရေ။
အမလေး ဟ ဟက်ကာ တွေမဟုတ်ပဲ ဟက်ချီးတွေနဲ့ မှ လာတွေ့နေပါပေါ့လား
ကြောက်စရာ ကောင်းလိုက်တာ.. ကိုယ့်အကျင့် ကို ကိုယ်ဖေါ်မလို့တဲ့…၊
ငါ့ passward လဲ ပြောင်းထားမှ…. အမလေး…၊
ကျောင်းဆရာလောက ဒီလောက်ကြီးတော့ မလုပ်သင့်ကြဘူးထင်ပါတယ်။ ဘယ်သူမှားမှား ကျောင်းနဲ့ကျောင်းဆရာ၊ ကျောင်းသားနာမည်ပျက်တယ်။ ပညာရေးလောက နည်မည်ပျက်ပါတယ်။